Sacuudiga oo u ogolaaday haweenka inay kaxeyn karaan gawaarida
arlaadi September 26, 2017 No Comments
Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa dib uga noqotay sharci mudaba saarnaa haweenka dalkaas kaasoo ka reebayay dumarka inay kaxeeyaan gawaarida.
Wareegto kasoo baxday boqor Salmaan Bin-Cabdulcaziz ayaa loogu ogolaaday dumarka boqortooyada Sacuudiga inay kaxeyn karaan gawaarida si waafaqsan shareecada Islaamka.
Gudi wasiiro ah oo loo xilsaaray dhaqangelinta wareegtada boqorka ayaa shir yeelan doona mudo bil ah kadib markii ay soo baxday wareegtada si ay iskugu dubaridaan waxyaabaha loo baahanyahay inay wareegtadu dhaqangasho.
Wareegtada ayaa si sharci ah u dhaqangeli doonta inta u dhexaysa 23-24 bisha Juun ee sanada 2018 ayada oo markaas wixii ka dambeeya ay dumarku kaxeyn karaan gawaarida.
Arinta ku aadan inay dumarka Sacuudiga loo ogolaado wadida baabuurta ayaa ahayd mid mudaba soo taagnayd ayada oo si weyn looga doodi jiray bulshada dhexdeeda iyo weliba baraha internetka ee ay bulshadu adeegsato.
Haweenka Sacuudiga ayaa tiro dhowr jeer horay u jebiyay xayiraada xaga wadida gawaarida ee saarnayd ayada oo in badan ka la arkay dumar gaadiid ku dhex kaxeynaya magaalooyinka dalkaas.
Sacuudiga ayaa u muuqda inuu ku dhaqaaqayo isbedelo dhanka bulshada ah taasoo loo fasiran karo inuu kaga hor tagayo inay dadkiisu ku kacaan boqortooyada oo hada ku jirto dagaal dhaqaale badan uu kaga baxayo oo ka socda dalka Yemen sidoo kalena qilaaf siyaasadeed uu kala dhaxeeyo dalka yar ee gaaska iyo saliida qaniga ku ah ee Qatar.